Nambara ny Diaben'ny Tontolo faha-3 - Ny Diabe Manerantany
Home » About us » Tsindrio ny Notes » Navoaka ny martsa eran-tany faha-3
18 / 10 / 2020 04 / 10 / 2020 ny Antonio Gancedo
Ny Diabe Iraisam-pirenena faha-3 ho an'ny 2024 dia nambara tao amin'ny Forum for Nonviolence any Mar del Plata - Arzantina
Amin'ny fankalazana ny Tsingerintaona faha-10 de Herinandron'ny herisetra any Mar del Plata nandroaka Osvaldo Bocero y Karina Freira izay misy mpikatroka avy amin'ny firenena 20 mahery America, Eoropa y Africa.
misy Rafael de la Rubia nambara mivantana avy Madrid izay ao amin'ny 2024 ny Diabe ho an'ny fandriampahalemana sy ny tsy fihinanam-bilona.
El Forum momba ny tsy herisetra Nanomboka tamin'ny lanonana kely sy mampihetsi-po tamin'ny fangatahana fandriampahalemana eran'izao tontolo izao tamin'ny fiteny telo: español, portogey y guarani. Minitra vitsy nisaintsainana sy fifandraisana teo amin'ireo mpandray anjara.
Osvaldo dia nanolotra ny zava-bita sy ny fivoaran'ny nanomboka a Herinandron'ny herisetra ao anatin'ny rafitry ny 1ª Martsa Manerantany ao amin'ny 2009 ary ny fivoarany tao anatin'izay 10 taona izay. Lahatsary fanadihadiana fohy dia naseho miaraka amin'ny sarin'io dia io.
Mamoaka ny sasany amin'ireo tolo-kevitra izahay Rafael de la Rubia, ny mpitondra tenin'ny Martsa izao, nanambara tamin'ny lahateniny:
"Moa Herinandro tsy misy herisetra Ohatra iray amin'ny faharetana mandritra ny 10 taona izy io, izay manome aingam-panahy. Io dia ny hetsika maharitra ao anatin'ilay dingana, izay mampiseho amintsika ny làlana sy ny fandrosoana.
Teny tsy herisetra:
Amin'ity andro ity dia maniry ny hanatrika ny teny hoe tsy misy herisetra isika
Tamin'ny fiandohan'ny volana febroary 2016, ao amin'ny Forum an'ny Peña Blanca (Honduras), ny fikambanana humanista MSGySV nandefa ny fampielezan-kevitra amin'ny fampidirana ny teny tsy herisetra amin'ny dikantenin'i Akademia amin'ny fiteny espaniola.
Izy io dia mikasika ny fanitarana ity hetsika ity amin'ny fiteny hafa izay tsy manana ilay teny. Tsy misy herisetra amin'ny teny rosiana ненасилие, amin'ny fiteny tseky dia nenásilí, amin'ny teny alemà gewaltlosigkeit, amin'ny italianina nonviolenza ary amin'ny teny anglisy tsy hiady, fa amin'ny Espaniôla dia tsy misy izany.
Raha te hampidirina ao amin'ny rakibolana ny teny Espaniôla ny teny, dia tsy maintsy atao antontan-taratasy fa ampiasaina amin'ny fomba mahazatra izy, izany no fomba fiasa mety hampidirina ao. Anjaràn'ny maso ivoho ara-tsosialy ny miasa ka ny fampiasana azy io dia mazàna ary ny dikany dia ampifanarahana sy takatra amin'ny toerana rehetra itenenana ny espaniola.
Manararaotra isika Andro tsy misy herisetra hanasana azy hampiasaina ho teny tokana, miaraka sy tsy misy ny tohana, ary amin'izany dia afaka mahazo ilay teny voahaja amin'ny teny espaniola isika. Andao hiara-hiasa hampalaza ny fampiasana azy ary, miaraka aminy, hanome ny fikambanana teny lakile ho an'ny vanim-potoana sosialy vaovao.
Fetiben'ny horonantsary tsy misy herisetra: Androany dia manomboka ity Fetibe Iraisam-pirenena 3 andro natolotry ny FICNOVA.
Ranomasina fandriam-pahalemana mediteraneana: Nanomboka ny fampielezan-kevitra tao amin'ny 2ª Martsa Manerantany izay mikasa ny hanova ny Mediteraneana ao anaty ranomasina fandriam-pahalemana, fivorian'ny kolontsaina ary tsy misy fitaovam-piadiana niokleary.
- Bokin'ny Sketch an'ny Saure Editorial. Pejy 100. Hivoaka afaka herinandro vitsivitsy. Amin'ny fiteny Espaniola sy Basque. Andrasana ny fanontana amin'ny fiteny hafa.
- Bokin'i Sekretarian'ny loka Nobel fandriampahalemana: Nanontaniana MSGySV soraty ny toko momba ny herisetra. Tokony hanatitra azy amin'ny volana Desambra amin'ity taona ity isika.
-Bokin'ny MM faharoa. Miaraka amin'ny atiny sy ny fivoriambe izahay. Mbola tsy hita ny vaovao avy amin'ny toerana sasany.
Izahay dia mieritreritra ny hiandry ela kokoa ary hamoaka azy rehefa TPAN. Amin'izay dia hampiditra toko manokana momba an'io lohahevitra io izahay.
-Ny hetsika manaraka
- Vita ny asa amin'ny fanaovana Festival of cyberactivism manerantany momba ny lohahevitra hoe TPAN hankalazana ny fidirana an-keriny rehefa nambara Firenena Mikambana. Manisa ny fiandohan'ny taona 2021 izahay.
- Handray anjara amin'ny Diabe ho an'ny fandriam-pahalemana Perugia - Assisi amin'ny 10 Oktobra ho avy izao.
- Fihaonambe iraisam-pirenena: ao amin'ny Geneva amin'ny faran'ny volana oktobra, Sekretarian'ny loka Nobel fandriampahalemana efa nanasa MSGySV miditra an-tsehatra miaraka amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena 4 hafa, mba hanoloran'ny tanora avy amin'ireo fikambanana ireo ny tolo-keviny, ny tetikasany ary ny hetsika ataon'izy ireo.
- Forum ho an'ny fandriam-pahalemana any Amerika Latina amin'ny diaben'ny 2021 entin'i Loka Nobel fandriampahalemana miaraka amin'ny fanohanan'ny tanànan'i Merida-Meksika ary oniversite 9 any amin'ny faritra Maya. Asaina koa ny vatantsika MSGySV.
-Marty eran-tany faha -3
-Manambara ara-dalàna izany izahay 3ª MM dia hanomboka amin'ny 2 Oktobra 2024
-Toy ny ao amin'ny 2ª MM hanomboka sy hifarana amin'ny tanàna iray ihany izy aorian'ny fihodinana ny planeta.
-Mampiditra fitsangatsanganana isam-paritra toy ny: Diaben'ny Amerikanina Tatsimo, Diaben'ny Amerikanina afovoany, Diabe ho an'ny Ranomasin'ny fandriampahalemana y Diaben'ny Amerikanina Latina. Manantena izahay fa hisy olon-kafa handray anjara. Manantena izahay fa hanao diabeta manana ny maha izy azy manerana ny kaontinanta.
-Hiditra ao koa ny endrika fizahan-tany virtoaly, mba hanomezana anjara biriky lehibe indrindra ho an'ireo liana.
Kalandrie ny 3 martsa tontolo
-Ny 21/6/2021, ho fantatra ny tohatry ny tanàna hangataka ny 3 MM 2024.
-Ny tanànan'ny mpifaninana dia handefa ny fangatahany amin'ny 21/6/2022.
-2/10/2022 dia hambara amin'izay hanombohana / hifaranan'ny MM faha-3.
-2/10/2024 fanombohana ny 3 martsa tontolo izao.
Avy amin'ny Ekipa mpandrindra manerantany MSGySV Nampahafantarina ahy fa amin'ity volana oktobra ity dia hatao ny fanisam-bahoaka vaovao ary avy eo dia hatao ny fifidianana ho an'ny ekipa fandrindrana vaovao. Manasa anao izahay avy eo handray anjara sy hanatevin-daharana Tany tsy misy ady sy herisetra.
Tsy misy zavatra hafa, misaotra betsaka…
Misaotra an'i Liz Vasquez izahay tamin'ny fandikana anglisy an'ity lahatsoratra ity.